အိန္ဒိယနိုင်ငံ COVID-19 လူနာအရေအတွက် သန်း ၃၀ နား ရောက်ရှိ ၊ နေ့စဉ်လူနာသစ် ၅၀,၀၀၀ အောက် ကျဆင်း - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးရန် Swab ရယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နယူးဒေလီ ၊ ဇွန် ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 လူနာသစ် ၄၂,၆၄၀ ဦးနှင့်အတူ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် လူနာအရေအတွက်ပေါင်း ၂၉,၉၇၇,၈၆၁ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။ယင်းမှာ ၉၁ ရက်တာကာအတွင်း တစ်ရက် လူနာအရေအတွက် ၅၀,၀၀၀ အောက် ပထမဆုံးအကြိမ် လျော့နည်းကျဆင်းလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
“နေ့စဉ်ပြန်လည်သက်သာလာမှုအရေအတွက်ဟာ ရက်ပေါင်း ၄၀ ရက်ဆက်တိုက်အတွင်းမှာ နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားမှုအသစ်ထက် ဆက်လက်ပြီးတော့ ပိုများနေပါတယ်။”ဟု အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇွန် ၂၁ ရက်နံနက်ပိုင်းမှစ၍ COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၁,၁၆၇ ဦး ရှိခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၃၈၉,၃၀၂ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ နေ့စဉ် COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့် လူနာအရေအတွက်သည် ဧပြီလမှမေလအတွင်း နေ့စဉ် လူနာ ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်ထိ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း လူနာ ၄၀,၃၆၆ ဦး တိုးလာခဲ့ပြီးနောက် ဆေးရုံ၌ တက်ရောက်ကုသဆဲ အတည်ပြုလူနာ ၆၆၂,၅၂၁ ဦး ရှိနေသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လူနာကုသမှုသည် ၇၉ ရက်ကြာမြင့်ပြီးနောက် ၇၀၀,၀၀၀ အောက်သို့ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။
ဇွန် ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရရှိသူ ၈၁,၈၃၉ ဦးနှင့်အတူ နိုင်ငံအနှံ့ရှိ ဆေးရုံများမှ ရောဂါပြန်လည်သက်သာပြီး ဆင်းခွင့်ရသူ စုစုပေါင်း အရေအတွက်မှာ ၂၈,၉၂၆,၀၃၈ ဦး ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သောနှစ်မှစ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါအဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ပွားရာ နေရာများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည့် ဒေလီမြို့၌ ယခုနှစ် ဧပြီလမှမေလအတွင်း ရက်များတွင် လူနာ ၂၈,၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပြီး ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် လူနာသစ် ၈၉ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
India’s COVID-19 tally close to 30 mln as daily new cases below 50,000
NEW DELHI, June 22 (Xinhua) — India’s COVID-19 tally rose to 29,977,861 Tuesday, with 42,640 new cases recorded in the past 24 hours, said the federal health ministry.
“Daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 40th consecutive day,” said the ministry.
Besides, 1,167 COVID-19 deaths have been recorded since Monday morning, taking the country’s death toll to 389,302.
Daily COVID-19 cases peaked to over 400,000 for several days in April-May in India.
Still there are 662,521 active cases, afteradecrease of 40,366 active cases during the past 24 hours. The country’s active caseload fell below 700,000 after 79 days, according to the ministry.
A total of 28,926,038 people have been successfully cured and discharged from hospitals across the country, with 81,839 of them discharged since Monday morning.
Delhi, which has been one of the worst-hit COVID-19 hotspots in India since last year and witnessed over 28,000 cases for several days in April-May this year, recorded 89 new pandemic cases and 11 deaths through Monday. Enditem
Photo – A health worker takesanasal swab sample ofawoman to test with Rapid Antigen Test (RAT) for COVID-19 in Nagaon district of India’s northeastern state of Assam, June 16, 2021. (Str/Xinhua)